Novela Negra, otutu nkpuru. | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Novela Negra, otutu nkpuru.
Site na Sherlock Holmes ka Lisbeth Salander: Akwụkwọ akụkọ mpụ mere.
Akwụkwọ ọgụgụ mpụ na-ebilite na Edgar Allan Poe na onye na-elekọta Auguste Dupin n'okporo ámá nke Paris ya na akwukwo akuko isiokwu Mpụ nke morgue Street. Kemgbe ahụ akwụkwọ mpụ ahụ agbanweela, ọ gbasawo, gbasaa, feminized, gbasasịa ma bịarute nso ụjọ. Nke mere na ọbụlagodi ndị na - agụ egwu egwu anaghị amasị ụdị niile.
Ọ ga - ekwe omume na Miss Marple, Philip Marlowe, Pepe Carvalho, Lisbeth Salander na ndị nche obodo aha ha bụ Vila na Chamorro niile bụcha otu nwoke? Ọ bụ. Otu ụdị, ụdị dị iche iche.
1 Maka ndị purists: Noir Novel.
2 Maka ndị na-emegharị oge na-enweghị ọdịnala: Akwụkwọ Ọhụrụ Oge Ọhụrụ.
3 Maka ndị ochie: akwụkwọ akụkọ Britain.
4 Maka ndị na-amụ uche gbagọrọ agbagọ mmadụ: Nordic Noir Novel.
5 Maka ndị na-ere ahịa: akwụkwọ akụkọ nchọpụta.
6 Maka ndị hụrụ ọdịbendị ọwụwa anyanwụ n'anya: Akwụkwọ akụkọ Japanese Noir.
7 N'ihi na ndị na adored Prying Window: Domestic Noir.
8 Maka ndị anyị na-achọ iri nri: Gastronomic Noir.
Maka ndị purists: Noir Novel.
Akwụkwọ akụkọ America sitere na 50s na 60s nwere onye nchọpụta nwoke, nwoke siri ike nke ndụ kụrụ, ụmụ nwanyị mara mma na ndị obi tara mmiri bụ ndị na-ata ahụhụ onye protagonist na gburugburu ebe dị omimi nke nnukwu obodo. Ya na Sam Spade nke Dashiell Hammett na Philippe Marlowe nke Raymond Chandler nwere dị ka mma agha mbụ, ma ọ bụ ọbụlagodi Pepe Carvalho nke Manuel Vázquez Montalbán, ugbu a ọ sonyere na Cormoran Strike group, nke Roberth Galbraith na-abụghị onye ọzọ karịa pseudonym ọhụrụ nke Joanne Rowling mara maka ha niile dị ka JK Rowling.
Maka ndị na-emegharị oge na-enweghị ọdịnala: Akwụkwọ Ọhụrụ Oge Ọhụrụ.
Ọ bụ, ma ọ bụ obere, mmeghari nke nwoke na nwanyị, ya na nwoke ma ọ bụ nwanyị na-arụ ọrụ naanị ya ma ọ bụ na ụlọ ọrụ, mana yana ndụ mmekpa ahụ ma debe ya n'ime ụwa ma ọ bụ na ụwa dara oke ọnụ na nke rụrụ arụ na nke rụrụ arụ ego dabere na imebi iwu na ịkwanyere mmadụ ndị ọzọ ùgwù, anyị na-edezi ọtụtụ akwụkwọ akụkọ ugbu a. Otu n'ime ndị bu ụzọ nye ndị uwe ojii nyocha akwụkwọ akụkọ mpụ bụ Sue Grafton ya na onye nyocha ya bụ Kinsey Milhorne. Na Spain, obi abụọ adịghị ya, onye mbụ nyefere onye omekome akwụkwọ akụkọ America na ókèala anyị n'aka Alicia Giménez Barlett na Petra Delicado. Ihe atụ ndị ọzọ nke akwụkwọ akụkọ a nwere oke ọkpọ bụ Víctor del Árbol ma ọ bụ Leonardo Padura na onye uwe ojii nwụrụ n'ihi okwukwe ya bụ Mario Conde
Maka ndị ochie: akwụkwọ akụkọ Britain.
Igbu mmadu nke nwere obere ọbara ma dozie ya naanị akụ nke ọgụgụ isi na aghụghọ nke onye nyocha ahụ, edobere na okpokolo agba mara mma, nwere isi okwu ha bụ Agatha Christie, ya na Poirot, Miss Marple ma ọ bụ Tommy na Tuppence na, ugbu a, ihe atụ kachasị mma She akpọrọ Lady of Crime: Donna Leon na kọmishọna ya bụ Brunetti, na Venice enweghị atụ.
Maka ndị na-amụ uche gbagọrọ agbagọ mmadụ: Nordic Noir Novel.
Akwụkwọ akụkọ mpụ nke Nordic na-ebi n'oge ọ kachasị mma. Amụrụ na 60s n'aka Sjöwall na Wahlöö na onye nyocha ha bụ Martin Beck, ọganihu nke Henning Mankel na Inspektọ Walander na ihe ịga nke ọma nke mba Stieg Larson na Lisbeth Salander, ndị ode akwụkwọ dịka Jo Nesbro, Camila Lackberg na ọtụtụ ihe ọzọ, ebe ọ bụ na ọ bụ nnukwu mpaghara na ụdị akwụkwọ akụkọ a.
Ogbugbu ndị na-eme ihe ike na nkọwa doro anya, gburugburu ebe gbara ọchịchịrị nke ihu igwe na ọdịdị ala nke mpaghara ahụ kwadoro, mmetụta ole na ole ma ọ bụ oke mmetụta, na ndị nchọpụta nwoke na nwanyị nwere ndụ ahụhụ na-egosi njirimara nke usoro a.
Maka ndị na-ere ahịa: akwụkwọ akụkọ nchọpụta.
Ha bụ ndị na-elekwasị anya na usoro nyocha. Ndị uweojii nwere profaịlụ dị iche iche, gụnyere ndị ikpe na ndị ọkachamara na-enyocha mpụ. Ọ bụ ụdị a na-ebute na ihuenyo, nke na-akpali usoro dịka CSI. Patricia Corwell ma ọ bụ Arthur Connan Doyle bụ ihe atụ nke ụdị akwụkwọ mpụ ebe nyocha bụ isi.
Na Spain, Esteban Navarro, onye uwe ojii lara ezumike nká, bụ ihe atụ kachasị mma nke ụdị a. N'ime akwụkwọ akụkọ ya, anyị nwere ike ibuga onwe anyị n'ime ọdụ ndị uwe ojii yana ọrụ ndị uwe ojii kwa ụbọchị: mmekorita ya na ndị nchekwa obodo, akụkọ, nkwupụta ... ha na-ede akwụkwọ akụkọ ya.
Maka ndị hụrụ ọdịbendị ọwụwa anyanwụ n'anya: Akwụkwọ akụkọ Japanese Noir.
Ọ bara uru ịgwọ ya iche n'ihi na, ọ bụ ezie na amachaghị na Spain n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na otu n'ime mbipụta akwụkwọ ọhụụ nke Getafe raara nye ya, o nwere atụmatụ ndị pụrụ iche.
Enweghi mkpali nke ndi odide a: Oyi na ichota, ha adighi aru dika ndi mkpọrọ nke mmetụta uche, site na ezumike na oyi.
Na nhazi nke akwụkwọ akụkọ ndị Japan, teknụzụ dị ebe niile.
Ọ na-eso obi ọjọọ na nke siri ike, akwụkwọ akụkọ mpụ America mara mma, juputara na squalor na enweghị olileanya.
Dị ka ndị na-akwado akwụkwọ akụkọ mpụ ndị Japan, anyị nwere ike ịkọwapụta site n'oge ochie dịka Seishi Yokomizo, Haruki Murakami ma ọ bụ Yukio Mishima nye ndị ode akwụkwọ ugbu a dịka Natsuo Kirino, Masako Tokawa, Miysuyo Kakuta.
Akwụkwọ akụkọ mpụ ndị Japan gosipụtara omume obi ọjọọ nke ifo Tokyo.
N'ihi na ndị na adored Prying Window: Domestic Noir.
Ndị a bụ akwụkwọ akụkọ aghụghọ nke na-agbanahụ ndị na-egbu ihe na-egbu egbu, ihe gbasara uche na uche na ntụrụndụ nke ime ihe ike. Mpụ na-eme n'ụlọ, n'ime ezinaụlọ, nke na-eme ka ha jupụta oyi. Ha na-enyocha mmetụta uche nke ndị ogbu mmadụ, mkpali igbu ndị nkịtị, ndị protagonists na-enyocha ma nyochaa nsogbu nke onwe ha ma banye n'ime ụwa nke ndị omempụ na ndị metụtara, ebumnobi ha na ahụhụ ha. Nọmalị, onye nyocha ahụ abụghị ọkachamara. Ha bụ ndị na-ekwu ụdị a Steve (SJ) Watson, Roger Jon Ellory. Na Spain, Clara Tíscar, Lorena Franco na María José Moreno bụ ezigbo ihe atụ.
Inside na Domestic Noir bụ adịgide Lit (na-ejide akwụkwọ ọgụgụ isi na-adọrọ adọrọ), na-enwekarị mmetụta uche, n'ọnọdụ ụfọdụ dị nso na akwụkwọ akụkọ ịhụnanya na ndị edemede na-ede banyere ụmụ nwanyị: Gillian Flynn na Lost ma ọ bụ Paula Hawkings na The Girl on the Train bụ ndị nnọchi anya mba ụwa kachasị.
Maka ndị anyị na-achọ iri nri: Gastronomic Noir.
Anyị enweghị ike ịkwụsị ịkọwa ụdị na-eme n'ụlọ, nke ọkacha mmasị anyị ọkacha mmasị na onye isi ihe ọhụụ na Arzak, Xabier Gutiérrez, ya na trilogy El Aroma del Crimen. Gastronomic noir abughi nani na inye aka na kichin na akwukwo ojoo dika Stanley Gardner mere ya na onye ọka iwu gastronomic a na-echefu echefu, Perry Mason, ma edeputara akwukwo ndi ozo n'uwa.
Amaghị m ma ha niile bụ ndị, mana ihe m ga - emesi gị obi ike na ndị niile bụ, dị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » Black akwụkwọ » Novela Negra, otutu nkpuru.
Ana m agwa gị. Ngwa iji dezie akụkọ n'asụsụ ogbi